Yeyiphi nkampani PVC umgangatho imidlalo ingcono? - China Shijiazhuang Yichen Floor Plastic
Yeyiphi nkampani PVC umgangatho imidlalo ingcono?
PVC umgangatho imidlalo luhlobo yomgangatho ephuhliswe ngokukodwa ibala lezemidlalo ngokusebenzisa PVC Materials. Ngokukodwa, kokuba lukhutshwe phala ukutyabeka ubuchule okanye calendering ukutyabeka, extruding okanye cinezela ubuchule, kuxwebhu zeendawana eqhubekayo, esebenzisa PVC kunye nentlaka co-Polymer njengoko izinto eziphambili ekrwada ngoko ukongeza lokufaka, plasticizer, somfanekiso, colorant kunye nezinye izinto abancedisayo.
Ke PVC nokwadala imidlalo leyo nkampani ingcono? Le nokwadala zemidlalo Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd umbala oqaqambileyo, indlela ecacileyo kunye nemvakalo, umaleko ngaphaya kwaye inkalo omhle antislip, ukothuka edalwayo, njl ukutyibilika iye yaluphumelela isiqinisekiso ukhuselo lokusingqongileyo, uluhlaza kunye eco iimveliso -friendly. Ingasetyenziswa le iindawo kunye neemfuno ukhuselo lokusingqongileyo, ezifana indawo ephithizela ephezulu esibhedlele, enkulisa, njl Kwakhona, ufakelo le ukutyibilika PVC kaThixo Kulula kakhulu kwaye elula. Kuphela self-sokulinganisa ikhonkrithi, oko efakwe, kwaye akusayi kubakho ingxolo enkulu ngexesha lofako.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd., njengomvelisi ngobuchule PVC ukutyibilika ezemidlalo, onolawulo umgangatho olungqongqo isikhulu inkonzo yasemva intengiso, ukuqinisekisa ukuba zonke umthengi ofumana imveliso abaqeqeshiweyo.
Uqinisekiso Product Quality: iimveliso zethu abanalo mahluko umbala (ibhetshi ofanayo), Umda yoboya Lotus igqabi kwikona, uPienaar, ubukhulu obungalinganiyo, ivumba kunye nezinye iingxaki nokungafezeki. Zonke iimveliso Yichen ziya ilebhile isiqinisekiso abaqeqeshiweyo ngaphambi kokuba mveliso. Kwakhona esi siqinisekiso imveliso ngokwayo kunyaka-6 (isiphelo omkhulu), kwiminyaka emi-2 ukuze umgangatho eqhelekileyo. (Ngaphandle iimveliso ngokukodwa wena kunye nokunciphisa umgangatho okubangelwa ukusetyenziswa, ukufakela, ulondolozo amahlwempu.)
Iimveliso ezingundoqo of Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd: kumgangatho iplastiki, PVC ukutyibilika, ukutyibilika ezemidlalo, UV series ukutyibilika, ukutyibilika yohlobo olunye njalo njalo. iimveliso zethu nje kuphela mayamkelwe kurhwebo lwasekhaya, kodwa kwimarike oversea. Yichen umgangatho unalo igama elihle kakhulu kwaye ukholo kunye nentsebenziswano oluhle iinkonzo zethu zasekhaya phesheya umgangatho kwimveliso, inkonzo kunye nenkonzo emva-intengiso, etc